सौन्दर्य | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
सावधान ! मेकअपका यी पाँच तरिकाले बुढी देखाउँछ तपाईंलाई
जवान देखिन हरेकको चाहना हुन्छ । तर थुप्रै पटक थाहा नपाइकनै गलत मेकअपका कारण हाम्रो उमेर धेरै देखिन थाल्छ । ...
मेकअप शेयर गर्नुअघि जान्नैपर्ने कुरा
अक्सर घरमा दिदीबहिनीहरु मेकअप आपसमा शेयर गर्छन् । तर, सौन्दर्य प्रशाधन शेयर गर्नु खतरनाक हो । कसरी ? ...
यी हुन दुई दिनमै अनुहारलाई चमक र सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय
महिला होस या पुरुष सबैलाई सुन्दर बन्न मन लाग्छ । तर काम व्यस्तताले गर्दा हामीले चाहेर पनि यसको लागि समय निकाल्न सकिरहेका छैनौ । हामीले खाने खानाले पनि अनुहार राम्रो बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ। ...
फेसियल गर्ने सही तरिका
युवा अवस्थामा हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण शरीरमा बदलाव आउँछ । हर्मोनमा भएको बदलावका कारण स्यावसेस ग्रान्ड बढी सक्रिय भई छालामा चिल्लो पदार्थ बढी हुँदा पिम्पल आउँछ । ...
के हो चिनियाँहरुको सुन्दरताको रहस्य ? तपाइले पनि यसरी घरमै अपनाउन सक्नुहुन्छ
चिनियाँ युवतीहरु आफ्नो चम्किलो, बेदाग अनि नरम छालाको लागि चिनिन्छन्। ...
डन्डिफोरको दागबाट छुटकारा पाउन चाहनु हुन्छ?
मेकअप गरेको अनुहारलाई सुत्नुभन्दा अगाडि पानीले पखालेर सुत्नुहोस् र डन्डिफोर नआउनको लागि जति सक्दो अनुहारलाई धुनुहोस् ।यदि अनुहामा डन्डिफोर छ भने कहिले पनि त्यसलाई नकोट्याउनुहोस् । ...
अनुहार चम्किलो बनाउने ४ घरेलु तरिका
आफ्नो अनुहार स्वस्थ र आकर्षक होस् भन्ने विषयमा महिलाहरू बढी सचेत हुन्छन् । ...
अनुहार सुन्दर राख्न गर्नुहोस् सधैँ यि ८ काम हरु
अनुहारको छालाले व्यक्तिको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । शरीर जतिसुकै मिलेको होस्, कपाल स्टाइलिस होस्, कन्फिडेन्ट होस्, तर अनुहारको छालाको सौन्दर्य कमजोर छ भने सबै राम्रा पाटा ओझेलमा पर्छन् । नियमित सामान्य केही कुरामा ध्यान दिने हो भने छालाको सौन्दर्य कायम गर्न सकिन्छ: ...
याद गर्नुहोस् ! नङको रंगले पनि देखाउँछ गम्भीर रोगको संकेत
नङले औँलाको शोभा बढाउँछ । युवतीहरू अनेक पालिसले नङ रंग्याएर औँला आकर्षक बनाउँछन् । तर, के नङलाई सौन्दर्यसँग मात्रै जोडेर हेरे पुग्छ ? होइन । तपाईं आफ्नो नङ हेरेर शरीरमा लागेका विभिन्न रोगबारे पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो नङको रंग र आकारअनुसार पत्ता लगाउनुहोस् रोग .. ...
भ्रम नपाल्नुस्, जिम गएर बढी तौल उचाल्दैमा सिक्स प्याक देखापर्दैन
शरीरलाई आकर्षक देखाउन फिट्नेस सेन्टर धाउने युवा जमात बढ्दो छ । तर, जो फिट्नेस सेन्टर वा घरमै बसेर पनि नियमित व्यायाम गरेर आफ्नो शरीर सुन्दर बनाउन खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई सही परामर्श दिने फिट्नेस गुरुको भने अभाव छ । ...